10 တစ်ကမ္ဘာလုံးစမ်းသုံးဖို့အရက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 တစ်ကမ္ဘာလုံးစမ်းသုံးဖို့အရက်
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
လျှို့ဝှက်ချက်ပြုတ်နည်းများ, စွဲမက်ဖွယ်အရသာများ, အလွန်အကျွံအရက်သမား, ကမ္ဘာကြီး အကောင်းဆုံးဘားများ အသင်းများက၎င်းကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် 10 မဖြစ်မနေသောက်ရမည့်အရက်များ. တရုတ်ကနေဥရောပအထိ, အဆိုပါအချို့ 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရက်သောက်ရန်နှစ်ပေါင်းရာဂဏန်းရှိပါပြီ. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သူတို့ကအရမ်းနာမည်ကြီးတယ်, ဒါမှမဟုတ်အရက်ကိုဖမ်းဆုပ်ပါ 2, သင်၏အားလပ်ရက်သည်လက်လွတ်မခံသင့်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်.
1. တစ်ကမ္ဘာလုံးစမ်းသုံးဖို့အရက်: Aperol Spritz အီတလီ
ဝိုင်အခြေခံကော့တေး, Aperol Spritz သည်အရသာရှိပြီး၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အဓိကသင်တန်းများသို့မရောက်လာမီသင့်တော်သောပမာဏအတိုင်းလုပ်လိမ့်မည်. Spritz သည်ဂန္ထဝင်နာမည်ကြီး aperitif ဖြစ်သည် အီတလီမြောက်ပိုင်းတွင်, ပထမ ဦး ဆုံး Venice တွင်စတင်ခဲ့သည်. Spritz သည် Campari ရောစပ်ထားသည်, prosecco, ဆော်ဒါရေ, ရေခဲပေါ်မှာ, ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည် သင်၏မြို့အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်.
လိမ္မော်ရောင်အနီရင့်ရင့်အချိုရည်ကိုမျက်မှန်မြင့်မြင့်ခွက်ထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်, အီတလီရှိစားသောက်ဆိုင်တိုင်းနီးပါးတွင်. Aperol spritz သည်မြေထဲပင်လယ်ပူသောနွေရာသီနေ့များအတွက်လန်းဆန်းပြီးပြီးပြည့်စုံသည်, ဒါကြောင့်အီတလီမှာထမင်းစားတဲ့အခါဒီအရက်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းစမ်းကြည့်ရမယ်.
2. Absinthe ပြင်သစ်
ပိတ်ပင်ခံရပြီးနောက် 100 ပြင်သစ်၌နှစ်ပေါင်း, အစိမ်းရောင်နတ်သမီးသည်လူကြိုက်များမှုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်. ဤအစိမ်းရောင်အရက်သည်ပါရီမြို့ရှိစာရေးဆရာများနှင့်အနုပညာရှင်များကြားအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် 19-20ကြိမ်မြောက် ရာစု, Montmartre တွင်အများစု. Absinthe သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကြိုးစားရန်အပြင်းထန်ဆုံးအရက်အချိုရည်များ.
ယနေ့တွင်, သင် absinthe ရိုက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီအချိုရည်ကအရမ်းပြင်းတဲ့အတွက်တစ်ချက်သာရိုက်ပါ, ပဲရစ်ရှိဘားများစွာ၌. La Fee Verte, Lulu အဖြူရောင်, L'Absinthe ကဖေး, သင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးအရက်ကိုမြည်းစမ်းနိုင်သောအကောင်းဆုံးနေရာအချို့ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, absinthe ပုံစံတိုင်းတွင်သင်မြည်းစမ်းရမည့်အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းများသည် anise ဖြစ်သည်, ဒေါနပွင့်, မွှေးသောစမုန်နက်.
3. Sangria စပိန်
“ Sangria” သည် Sangre ဟူသောစကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည်ကိုသင်မသိပေ။, သွေး, စပိန်ဘာသာ. ဤအရက်ပါ ၀ င်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူစရာမလိုပါ, ဤအထူးနာမည်သည်ခိုင်မာသောအနီရောင်ကိုသာရည်ညွန်းသည်. နေ့လယ်မှာ Paella ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ Sangria တစ်ခွက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိပါဘူး.
ရောမလူမျိုးများသည်အလယ်ခေတ်၌စပျစ်သီးမှ Sangria ကိုပထမဆုံးဖန်တီးခဲ့သည်. စပျစ်ဖျော်ရည်သည်အရက်အနည်းငယ်သောက်ပြီးနောက်နာမည်ကြီးအရက်ယမကာဖြစ်လာသည်. ရိုးရာ Sangria ကို Tempranillo စပျစ်သီးမှပြုလုပ်သည်, Rioja ဒေသတွင်စိုက်ပျိုးသည်, စပိန်. သို့သျောလညျး, စပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီမှာနေရာတိုင်းမှာဒီအရသာရှိတဲ့အရက်ကိုမြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်.
ဘာစီလိုနာတွင်အကောင်းဆုံး Sangria နှင့်အကြံပြုထားသောနေရာအချို့: Arcano ရှိ cava နှင့်အနီရောင် Sangria, လက်မှတ်များတွင် Sangria နှင့်အတူဖရဲသီး.
ဂျင်သည် ၁၈ ရာစုတွင်ဟော်လန်မှဗြိတိန်သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသည်. အကြောင်းပြချက်မှာဂျင်းကိုတောဘယ်ရီသီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ထို့ကြောင့်ဂျင်းသည်ဆိုဒါနှင့်ရောစပ်ထားသောဘယ်ရီသီးအခြေခံအချိုရည်ဖြစ်သည်, ရေ, တခါတရံမှာ sweetener. ဂျင်းသည်အင်္ဂလန်တစ်ဝှမ်းရှိအရက်ဆိုင်များတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများကိုစုပြုံစေသောပထမဆုံးသောက်စရာဖြစ်သည်. အကြောင်းအရင်းကတော့အရက်ပမာဏမြင့်မားလို့ပါ, အတားအဆီးအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားစေသည်.
ယနေ့တွင်, ဂျင်းကိုအမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ရောစပ်ထားသည်: mint, သံပုရာအချပ်ကင်, peppercorns, အရည်ရွှမ်းသောအနီ-လိမ္မော်. Gin အလွန်အရက်ကြောင့်, အလင်းအလျင်ထက်ပိုမြန်မြန်မူးလိမ့်မယ်. ထို့ကြောင့်, အဖွဲ့လိုက်ဘားများတက်ရန်အမြဲအကြံပြုသည်. ဤနည်းအားဖြင့်သင်တစ် ဦး မှမလုံခြုံပါ ကမ္ဘာအနှံ့ရှောင်ရှားရန်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှု, ဖော်ရွေသောဒေသခံနှင့်တူသည်.
5. Becherovka ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏အထင်ကရအရက်သည်ဘီယာဖြစ်သည်. ချက်နိုင်ငံရှိဘီယာသည်ရေထက်စျေးသက်သာသည်, မဖြစ်မနေသောက်ရမယ့်အရက်က Becherovska ဆိုတာလူတော်တော်များများမသိကြဘူး. ဒါအမှန်ပဲ, အရက်အလွန်အကျွံသောက်သော Becherovska အချိုရည်သည်ဆောင်းရာသီတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်. ဤသောက်စရာထက်ပိုပါဝင်သည် 20 ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးအစားများ, သစ်ကြံပိုးခေါက်အရသာ, သစ်တော်သီး (သို့) နာနတ်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရောပါ. ၎င်းသည်ဆေးဖက်ဝင်အရသာပြင်းထန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, ဟုတ်ပါတယ် 38% အရက်.
Becherovska ကိုစမ်းရန်အကောင်းဆုံးနေရာသည် Becher's Bar တွင်ဖြစ်သည်. ဒီအအေးဘားကို Josef Vitus Becher ရဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ပါတယ်, အရက်ကိုအစာချေဖျက်ဆေးဝါးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်, ခါးသောအရက်ထဲသို့ယနေ့ဖြစ်သည်, ပြန်ဝင် 1807.
6. Pimm's Cup သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံဖြစ်သည်
သင်၏အင်္ဂလိပ်အားလပ်ရက်တွင် Wimbledon သို့မဟုတ် Chelsea နှစ်ပတ်လည်ပန်းပြပွဲကိုတက်ရောက်သည်? မင်းဒီ့ထက်ပိုသောက်လိမ့်မယ် 1 Pimm ခွက်. Pimms သည်အင်္ဂလန်၏နွေရာသီအဖြစ်အပျက်များတွင်နွေရာသီအချိုရည်ဖြစ်သည်, ချိုမြိန်, ရေခဲ, သစ်သီးနှင့်ကျွေးသည်, ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနေ့တွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်.
သို့သျောလညျး, ဤအသီးဖျော်ရည်သည်ကောင်းမွန်သောထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ရန်မမှားပါနှင့်, ၎င်းတွင်အမှန်တကယ်ပါ ၀ င်သောကြောင့် 25% အရက်. ဖြည့်စွက်ကာ, Pimms သည် gin-based ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အရက်ပါဝင်မှုကိုတိုးစေသည်, ထို့ကြောင့်သင်မည်သို့သတိထားမိမည်နည်း 1-2 အချိုရည်များသည်သင့်အားအကြံဥာဏ်ထက်ပိုပေးသည် အကြီးမားဆုံးနွေရာသီဗြိတိန်အဖြစ်အပျက်များ.
7. ဆောင်းရာသီတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးစမ်းသုံးရန်အရက်: Gluhwein
ခရစ္စမတ်အချိန်သည်ဥရောပ၌ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့် ခရစ္စမတ်စျေးကွက် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုများဖြစ်ကြသည်. Gluhwein သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထည့်သွင်းထားသောဝိုင်ဖြစ်သည်, ၎င်းကိုဂျာမနီရှိခရစ်စမတ်စျေးကွက်များတွင်သင်မြည်းစမ်းနိုင်သည်, သြစတြီးယား, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်, ပျော်ရွှင်သောလူအုပ်နောက်သို့သာလိုက်ပါ.
ဝိုင်နီနဲ့မတူဘူး, Gluhwein ကပိုချိုတယ်, citrus နှင့်ရော, နံ့သာမျိုး, သစ်ကြံပိုးခေါက်. ဖြည့်စွက်ကာ, မင်းနွေးထွေးစွာဝယ်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အေးမြသောဥရောပဆောင်းရာသီ၌လှည့်လည်သွားလာရင်းသင့်ကိုနှစ်သိမ့်အားရဖွယ်အနားယူစေလိမ့်မည်. ရာသီဥတုအေးသောအချိုရည်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်, Schnaps သည်အရသာရှိသောအရက်ယမကာများကိုဥရောပ၌စားရန်ကောင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
8. တရုတ်မှာစမ်းသုံးဖို့အရက်ယမကာများ: Maotai အရက်
တရုတ်လူမျိုး Maotai အရက်ကို Guizhou ပြည်နယ်တွင်ထုတ်လုပ်သည်. Maotai ကို ၁၆ ရာစုတွင်မင်မင်းဆက်အတွင်းပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်. ဤအရက်ကိုကြိုးစားသောက်ရမည့်တရုတ်အရက်သည်အရက်ကိုမှန်မှန်အသက်ရှူနိုင်ရန်ဤအရောအနှောကိုနှစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။.
ဒါကြောင့်, သငျသညျလျှင် တရုတ်တွင်ခရီးသွား, ဒါဆိုရင်ဒီထူးခြားတဲ့ Maotami အချိုရည်ကိုသေချာစမ်းကြည့်ပါ. ၎င်းကိုမြည်းစမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် 20-25 ဒီဂရီအပူချိန်, အထူးဇမ္ဗူပုံသဏ္glassန်ဖန်ခွက်တွင်. ဤအရာသည်ဤပဲငံပြာရည်အနံ့အရသာတရုတ်အရက်၏ကြွယ်ဝပြီးအာရုံစူးစိုက်သောအရသာကိုသင်မြည်းစမ်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်.
9. Grappa အီတလီ
သင်ဤအရသာအဆိမ့်ကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည် – စပျစ်သီးဘရန်ဒီသည်အီတလီမြောက်ပိုင်းတွင်လူကြိုက်များသည်, ဆွစ်ဇာလန်, နှင့် San Marino. မင်း Aperol ကိုနေ့လည်စာစားနေချိန်, grappa သည်ညစာစားပြီးနောက်သောက်စရာဖြစ်သည်, လေးလံသောခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ်ပီဇာအစားအစာများကိုချေဖျက်ရန်ကူညီသည်. ထိုကွောငျ့, ဂန္တဝင်ဝိုင်များနှင့်မတူဘဲသင်သည်မြင့်သောဝိုင်ခွက်များတွင်သောက်လိမ့်မည်, grappa ကမျက်မှန်သေးသေးလေးနဲ့လာလိမ့်မယ် 1-2 အောင်စ.
ဖြည့်စွက်ကာ, Grappa ကို espresso အတိုနဲ့တွဲစားနိုင်တယ်, သို့မဟုတ်၎င်းကိုကော့တေးလ်တွင်ရောစပ်။ မြည်းစမ်းနိုင်သည်, တစ်နည်းနည်းဖြင့်, သင်ဤနာမည်ကြီးအီတလီအရက်ကိုသောက်ခြင်းကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်, ၎င်းကိုအီတလီရှိသင်၏မဖြစ်မနေစားရမည့်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်များပေါ်တွင်ကပ်ထားသင့်သည်.
10. Jenever ဘယ်လ်ဂျီယံ
ဥရောပတွင်ရှေးအကျဆုံးအရက်များ, Jenever သည် Gin ၏မူလအစဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, ယနေ့ဤအချိုရည်နှစ်ခုသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရက်အချိုရည်နှစ်ခုဖြစ်သည်. ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ရှိစဉ်ကလူကြီးနှင့်လူငယ် Genever ကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်, aperitif အဖြစ်လူငယ် Gen, old Gen သည်ညစာစားပြီးနောက်အစာကြေသည်.
The Jenever သည်ဘယ်လ်ဂျီယံ၏စိတ်ဓာတ်ထက်ပိုသည် 500 နှစ်ပေါင်း. များစွာသောသူများသည်အကောင်းဆုံးဘယ်လဂျီယံဘီယာကိုမြည်းစမ်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ခရီးသွားကြသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, Jenever သည်ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ရိုးရာအရက်ဖြစ်သည်. သင်ဟာ Belgian Jenever ကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်အနေနဲ့လက်မလွှတ်ချင်ဘူးလား, ရွှံ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပုလင်းကိုရှာပါ, ဤအံ့သြဖွယ်အရက်ကိုသိုလှောင်ထားသောအထင်ကရလက်မှုအိုးများ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်ကိုကမ္ဘာအနှံ့စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာလိမ့်မည်. အကောင်းဆုံးအရက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်, ဒါတွေကိုစမ်းကြည့်ဖို့နေရာတွေ 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအရက်ယမကာများသည်မီးရထားခရီးနှင့်ဝေးသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစမ်းသုံးကြည့်ရန်အရက် ၁၀ မျိုး” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်၌တင်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#အချိုရည် Alcohol AlcoholDrinks AlcoholDrinksWorldwide PopularAlcoholDrinks